Vakadzi uye vanyoro. Gadzirira chiitiko chisina kufanana nezvimwe zvawakamboona. Iwe uri kuda kuona chikamu chakanakisisa cha 2017 uye 2018 (yakabudiswa) - NYE kuverengwa kweJs, Vjs, Nightclubs 2019
Vakadzi uye vanyoro. Gadzirira chiitiko chisina kufanana nezvimwe zvawakamboona. Iwe uri kuda kuona chikamu chakanaka che2016 uye 2017 (yakagadzirwa)
Izvo zviviri zvinokwana, 50,000 watts, uye boka rezvitsva zvinodhakwa ... Inguva yekukanda 2018 mumutauro! (yakagadzirwa)